Version 0.5.4 – Ciidamada Kumandoska
June 14, 2010 by dalabyo 2 Comments
Dhowr maalmood ka hor, waxaana aamusnaan sii daayay 0.5.4 taas oo go'an a cayayaanka yar oo laga helay 0.5.3, inta badan la ajax iyo xaaladaha gees qaar ka mid ah lagu turjumay url. Haddii version hore ee ka shaqeeya ka bixi kartid, runtii ma jirto baahi loo qabo in tiraysa.
Si kastaba ha ahaatee – fiira gaar ah, cayayaanka furay on our trac (trac.transposh.org) ay yihiin kuwa aan awoodno si loo xaliyo ugu dhaqsaha.
Enjoy version this iyo ha noo sheeg waxay kula tahay.
Filed Under: Messages General Tagged Iyadoo: bugfix, yaryar, sii daayo
Wax dhibaato ah, si aad u bilowdo plugin Transposh, Baadi waa :
dheeraad ayaa firfircoonaan, maxaa yeelay waxa ay kiciyay baadi dilaa ah.
Quburada qalad: qalad syntax, T_STRING la filayn, filaya T_OLD_FUNCTION ama T_FUNCTION ama T_VAR ama '}’ in /homez.143/paulet/www/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/transposh.php on line 56.
Ku mahadsan tahay ee aad caawimo
Waa in aad u cusboonaynta in PHP5